FAALLO : “Hal-abuurkii Qaran ee hiilka waayey ” W/Q Wariye Maxamed Jaamac Faarax. – Kismaayo24 News Agency
by admin 29th July 2016 30th July 2016 061
Alle Naxariistii jano hasiiyee waa 25 Bishaan July 2016 Dalka Hindiya ku geeriyooday Abwaan Qaran Cabdulqaadir Cali Cigaal oo ahaa abwaan alifay in ka badan 30 Ruwaayadood oo ka mid ahaa ruwaayadihii barisamaadkii ilaa manta loogu jecel yahay daawashadooda, waxaana uu ka tirsanaa Kooxdii Waabari.
Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal waxyaabaha sida wayn loogu yaqiin waxaa ka mid ahaa inuu ahaa macalin aan hagar kagalin aqoontiisa dadka Soomaaliyeed, waxaana aad loogu xasuustaa in burburkii uu ugu dhacay Magaalada Marka oo uu dhalinyaro kusoo barbaarinayay.
Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Shube oo ka mid ah Abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Ruwaayadiihii uu caanka ku ahaa ay ka mid ahayd ruwaayadii soo baxday 1975tii ee ‘’Jacayl Boob uma baahna’’.
Alle ha u naxariistee Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ayaa burburkii Soomaaliya kadib waxaa uu ka mid ahaa abwaaniinta Soomaaliyeed ee dalka aan ka bixin, isagoona Barnaamijyo badan oo la xariiray nabadaynta ka sameeyay gudaha dalka gaar ahaana Magaalada gaalkacyo oo uu deganaa.
AUN Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal anigu waxaa ku aqaanay halyeey jecel nabada, hal abuuraa leh miro macaan aaminsanaana wadinayad iyo Soomaali Jacayl ku beernaa qalbigiisa.
Maxaa igu kalifay inaan Qoro Faalladaan aan ugu magacdaray “Hal-abuurkii Qaran ee hiilka waayey “?
Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ma uusan helin maamuuskii uu ku lahaa Bulshada Madaxda Qaranka iyo kuwa Puntland oo uu ku nolaa mudadaii burburka, sidoo kale waxaa uu waayay hiilkii ay bulshada Soomaaliyeed ugali lahayd kuwaas oo aan ka hadlin sidii loo baahnaana u dareemin tiirkaas ka baxay Ummadda Soomaaliyeed.
ALLAHA U NAXARIISTO ABDIQADIR CALI CIGAAL
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, Ra’iisulwasaaraha dawladda, iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka midna xitaa kama tacsiyayna geerida abwaanka oo ka mid ahaa tiirarka Fanka Soomaaliya.
Waxaase la yaab lahayd markii Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Shube oo yaqaanay Booska Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ka joogay bulshada Soomaaliyeed uu habeenkii 25 July ee abwaanku geeriyooday fariin u marsiiyay Warbaahinta, Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo Madaxwayne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumaray Camay inay usameeyaan aad qaran Maydkiisana la keeno dalka loona sameeyo aas qaran.
Sidoo kale Abwaan Shube ayaa ku baaqay in wadooyin ama Iskuul loogu magic daro abwaanka si magaciisa loo maamuuso, waxaana dhamaan soo jeedintaas ay noqotay mid aan laga hoos qaadin.
Abwaanka waxaa lagu Aasay Dalka Hindiya oo uu ku geeriyooday, waxaana aan loo samayn maamuuskii uu xaqa u lahaa.
Ugu dambayntii waxaan kusoo gunaanadayaa faalladayda dhowr qodob oo aan u arko muhiim kuwaas oo ku aadan halyeeyga ka baxay Ummadda Soomaaliyeed Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal.
1:- in AUN Abwaanka loogu magacdaro Xarumo muhiim ah ama wadooyin ku yaal Muqdsho ama Gobolada kale ee dalka.
2:- in la sameeyo diiwaan buugeed lagu aruuriyo Taariikhdiisa faneed.
3:- in hada wixii ka dambeeya Madaxda Qaranka iyo kuwa maamul Goboleedyada dalka ay ku baraarugsanaadaan Dadka Soomaaliyeed ee umudan in la xuso.
W/Q Wariye Maxamed Jaamac Faarax
Turkiga: Nigeria waa in ay Xirtaa 17 Iskuul oo uu leeyahay Wadaadka Falaagada ah ee Fathullah Gulen
Aqoonyahano iyo Siyaasiyiin ka hadlay Musharaxnimada Madaxweyne Xasan (Maxay Tolow Ka Yiraahdeen??)
RW Sharmarke oo xil muhiim ah u magacabay …..
admin 18th August 2015 27th August 2015